Akpịrị ịkpọ nkụ na-eme ka ike gwụ mmadụ? - Mmega
Isi > Mmega > Akpịrị ịkpọ nkụ na ike ọgwụgwụ - otu esi eme ya
Akpịrị ịkpọ nkụ na-eme ka ike gwụ mmadụ?
Ọ bụrụakpịrị ịkpọ nkụna-aga n'ihu, ahụ na-ebugharị ọbara na-arụ ọrụmọzụlụma pụọ ​​na akpụkpọ ahụ, na-egbochi ike ahụ gị iji kesaa okpomọkụ, nke ga-emeziakpata ike ọgwụgwụ.June 7. 2017 Nọvemba
Ndi mmadu bu mmiri ara mmiri na-eche ugbu a, echere m na m nwere karama mmiri aha iri na iri n’elu tebụl m, mana anaghị m eji ha! Akpọrọ m mmiri? Olee otu m kwesiri isi mara? Anyị gbara otu isiokwu n'oge gara aga banyere oke mmiri anyị kwesịrị ị Dụ, nke na-ekwu na mgbe ụfọdụ anyị na-a drinkụ nnukwu mmiri. Dabere na data zuru ezu nke Associated Press bipụtara na 2013, anyị na-a galụ galọn mmiri 58 kwa afọ (220L) - ma ọ bụ ihe dịka iko 2,5 kwa ụbọchị (0.6L), nke ahụ bụ LỌỌ, ihe karịrị na ngwụsị afọ 90 mgbe soda nọ dị elu na ndepụta ihe ọ drinkụ drinkụ.
Ma ọ bụrụhaala na anyị anaghị emebiga ya ókè, ọ ga-akacha mma ị toụ obere mmiri karịa obere. Mmiri na-enyere aka idozi kemịkal ndị na-eme ka ahụ gị na-arụ ọrụ. Ọ na-ejupụta sel anyị, na-enyere aka ịhazi ọnọdụ okpomọkụ nke anụ ahụ anyị site na iku ume na ọsụsọ, na-ewepụsị ihe mkpofu, na-emepụta mmiri iji jide mmanụ, na-ete njikọ anyị, na-eme ka eriri afọ na ụbụrụ anyị mejupụta, na mmiri na-emetụta carbohydrates na protein. ọbara! Na-anụkarị na mmiri mejupụtara anyị bụ pacenti 75, mana akụkụ dị iche iche nwere etu mmiri hà.
Bụrụ nwere 73 pasent mmiri, akpụkpọ 64 pasent mmiri na akwara na akụrụ 79 percent mmiri; Ma, ọkpụkpụ dị naanị iri atọ na otu. Anyị nwere ike ịdị ndụ ruo ọtụtụ izu n’enweghị nri, ma ọ bụ nanị ụbọchị ole na ole n’enweghị mmiri. N'oge egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu nwere ike ida 6-10 pasent nke ahụ ha site na mmiri naanị ha! Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ, ọ dị mkpa ị toụ, ma ọ bụghị FLUIDS PUSH.
Nnyocha e mere na Journal of Applied Physiology chọpụtara na mbelata 15 pasent na ntachi obi na-agwụ ike n'oge akpịrị ịkpọ nkụ, mana ọ nweghị mmetụta na ike akwara zuru oke. Mmiri anaghị eme ka ahụ ike ma ọ bụ kwụsị ọrịa strok, oke oke nwere ike ibute hyponatremia. ma ọ bụ mmịrị nnu dị n'ọbara - nke nwere ike iduga ọnwụ.
Ọbụna akpịrị ịkpọ nkụ na-adị ntakịrị (otu ọkara i funahụ mmiri) nwere ike imetụta mgbado anya, ịmụrụ anya, na ncheta oge, yabụ ị drinkingụ mmiri tupu ịnwale ule n'ụlọ akwụkwọ NA iji mmega ahụ siri ike. Ọbụna ndị na-eme egwuregwu nwere ntụpọ nke gụrụ obere mmiri dara akara dị elu maka 'ike ọgwụgwụ, mgbagwoju anya, iwe, na ike' na akara mmụọ.
Hydkọ mmiri adịghị ala ala na-ebute ihe ize ndụ nke ụdị ọrịa shuga 2, ọrịa kansa na ọbara mgbali elu n'okpuru nrụgide d oke ibu! Otu nnyocha na physiology na omume chọpụtara na hypohydration - nke a makwaara dị ka akpịrị ịkpọ nkụ - nwere ike ibute ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke njehie ịkwọ ụgbọala na ọnọdụ ọnọdụ mgbanwe gbanwere na ụmụ nwoke, na nyocha ọzọ banyere ụmụ nwanyị chọpụtara na ọ bụ ezie na ha adịghị arụ ọrụ ọgụgụ isi, ha hụrụ otu mụbaa Ike ọgwụgwụ, erughị ala na ụjọ! Nke ahụ bụ naanị ihe dị nro, oke akpịrị ịkpọ nkụ bụ mgbe ọ dị oke egwu. Mgbe akpịrị ịkpọ nkụ gụchaa, ya amata na mmiri adịghị edochi ya, ọ na-akwụsị ọsụsọ, kwụsị mamịrị, ma gbalịa ichekwa mmiri nke ọma. Nke a na - eme ka ọbara sie ike, nke na - eduga n’ọbara mgbali elu.
Obi kwesiri ịgbanyekwu ike ikwanye ọbara apịtị n'akụkụ ahụ, na ọkwa cholesterol na-ebili ka mmiri na-efu site na sel, ọ ga-ekwe omume ijide obi na-abawanye, na mmetọ na-akawanye njọ. O yikarịrị ka nke a ọ ga-eme mgbe ị na-emega ahụ n'ihi na oge ụfọdụ ị ga-akwụsị, usoro akpịrị ịkpọ nkụ nke anụ ahụ na-akawanye njọ nke na-eme ka ohere ịgwụ mmiri gwụ n'amaghị na anyị akpịrị ịkpọ nkụ! Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere akpịrị ịkpọ nkụ, lezienụ anya ka ọ kacha mma ka ị ghara ị fluidụ mmiri mmiri na etu ọsụsọ gwụrụ gị, nke mere na mgbe akpịrị ịkpọ nkụ malitere, ahụ́ ga na-adịwanye ọkụ ma ọsụsọ ga na-ebelata. Ọsụsọ N contains ỌN contains nwekwara electrolytes, salts, na mineral nke ọ chọrọ ịdị ndụ; dị ka sodium na potassium.
ịgba ọsọ igwe
Ọ bụrụ na ị drinkụọ mmiri na afo efu, enwere ike itinye ya na eriri afọ ma banye n'ọbara n'ime ihe na-erughị nkeji ise - mana ozugbo ị riri ihe ọ nwere ike were minit 45 ruo nkeji 120 ka ọ 'gbari' mmiri ahụ kpamkpam. ! Ụ mmiri na / ma ọ bụ egwuregwu na-a drinksụ ihe ọ duringụ duringụ n'oge na mgbe arụ ọrụ siri ike nwere ike inyere ahụ aka ịgbake site na nfu ọ bụla nke mmiri mmiri NA-enyere gị aka ịjụ oyi! Ọbụna ozugbo. Ma ọ bụrụhaala na anyị na-ekwu banyere oyi. Toyota mere Toyota Trucks TRD akara ụfọdụ ezigbo ihe.
Mma ọchịchị teren!
Akpịrị ịkpọ nkụ na-emetụta akwara gị?
Akpịrị ịkpọ nkụadighi nmaemetụta akwaraarụ ọrụ site na igbochi usoro ọkụ, na-agbanwe mmeghari mmiri gafee membranes cell, yana igbochi usoro actin-myosin cross-Bridge. Anyi aghaghi icheta nke ahu jidesiri ikemọzụlụabụghịkanchoputa. Ukomọzụlụdịkamgbaàmà.27 mba. Dec 2019
Kedu ihe akpịrị ịkpọ nkụ na-eme n’arụ gị?
Ihe omume eji eme mgbe ekwesiriakpịrị ịkpọ nkụnwere ike ịka njọiheọkpọakwarammebi dikakan'ihi mmiri mmiri intracellular belata. Ekwe Okwuakwaraeme ihe na mbelata mmiri intracellular n'ogeakpịrị ịkpọ nkụe chepụtara ka o duga na nhazi, nkwekọrịta, na enzymatic protein denaturation.
Mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ọ na-enyere ike ọgwụgwụ mọzụlụ?
Mmiri -Na-arinụ mmiridum ụbọchị nana-a drinkingụ mmanyaegwuregwuụọ ihe ọ .ụ .ụn'oge mmega ahụbudị oke mkpa iji gbochie akpịrị ịkpọ nkụ, ọnwụ electrolyte, naike ọgwụgwụ. Ọbuakwadoro kaụọ ihe ọ .ụ .ụ10-12 iko 8-oz nkemmirikwa ụbọchị.Eprel 16 2012
Ihe ịrịba ama iri na abụọ na ị naghị a Waterụ mmiri zuru ezu Enweghị nnukwu ume na ụwa a karịa otu iko mmiri oyi jụrụ ogologo, mana ihe karịrị ọkara nke ndị ụwa na-ata ahụhụ site na akpịrị ịkpọ nkụ n’amaghị na ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu nye ahụike gị na Edemede na ngwụcha ngwụcha iji mụta otu akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike isi rụọ ọrụ na-adịghị mma ma dịkwa nfe ịlele ogo nkụlụ gị na sekọnd ise. Ozi a bara uru ga-ebuga na ụlọ akwụkwọ ọ bụla, tupu ị tụlee ihe ịrịba ama nke akpịrị ịkpọ nkụ, lee ihe na-eme mgbe ịnweghị mmiri zuru oke are bụ mmiri 60 ruo 80, yabụ ọ bụrụ na ị drinkughi mmiri zuru oke kwa ụbọchị ọ ga-apụ n'anya ọbara gị ruo pacenti nke a na - eduga na arịa ọbara ọgbụgba na - eme ka ọbara gbaa Ọbara na - eme ka ọbara mgbali elu na ohere nke nkụchi obi na ọrịa strok Nakwa ya na-efu site na oghere intercellular ruo 26 pasent na nke a na-eduga n'ịja mmiri acid na-adịghị mma Ọkpụkpụ na ala ọgụ N'ikpeazụ, ihe ruru pasent nke mmiri na-apụ n'anya gị na-eduga na incr Ozugbo ọnụ gị kpọrọ nkụ, nke ahụ yiri ihe doro anya, mana n'ezie nsonaazụ ahụ abụghị nke nnyapade, mmetụta na-adịghị mma n'ọnụ gị na-ejide gị O doro anya na mgbe ụfọdụ mmiri gwụtara Cheta na ihe ọ sugụ drinksụ na-aba n'anya bụ naanị ihe na-adịru nwa oge Nsogbu ka ukwuu D Dụ mmiri na-egbu oghere ọnụ gị na akpịrị Youkwesịrị idebe ọnụ gị ogologo mmiri mgbe usoro mbụ a gachara - akpụkpọ gị akpọọla nkụ Akpụkpọ gị bụ akụkụ kachasị ibu nke gị Yabụ ahụ kwesịrị ịnọgide na-adị mmiri mmiri. Ihe ịrịba ama mbụ nke akpịrị ịkpọ nkụ zuru ezu.
Enweghị mmiri pụtara enweghị ọsụsọ, nke na-eme ka ahụ nwee ike ịsachasị unyi na mmanụ. Achịkọbara ụbọchị niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ntiwapụ, drinkụọ mmiri mbụ. 3 Nnọọ Agụụ Anyị Gagharịrị Ọnụ Ọkụ Ahịrịrịrị Akpịrị Na-akọrọ Ọzara Dị Ka Onye Ọ Bụla Mgbe Abụ Onye Na-a Canụ mmanya na-eche Cangwa Gị na akingbụ Ahụ Gị Dị Nnọọ Nnọọ Mmanya Na-aba n'anya akpọnwụ niile si na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, n'ihi na ee, biko gosi ụbụrụ gị ruo mgbe oke mmiri a ga-alaghachi n'uru bara uru Gee ntị n'ihe ahụ gị na - agwa gị, ọ ma ihe ọ na - ekwu n'ihi na anya gị nọ ugbu a Clear mmiri ọ drinkingụ shouldụ kwesịrị emetụta ihe karịrị naanị ọnụ gị, akpịrị, enweghị mmiri ị na-a toụ na-eduga na nkụ, anya ọbara, na-enweghị mmiri n'ime ahụ gị, gland lacrimal gị ga-akpọnwụ, nke a nwere ike ibute ọtụtụ anya na anya gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ Anya m kwa ụbọchị Ejiri site na ihe dị ka pasent 80 nke mmiri, nke a bụ oke mkpa ya iji gbochie ọkpụkpụ gị ịpịsị ibe gị ụkwụ ọ bụla ị na-eme site n'idebe ahụ gị mmiri, na-eme ka nkwonkwo gị nwee ike banye ujo nke mmeghari mberede dika ịgba ọsọ, ịwụli elu, ma ọ bụ ịda ada dara ada? 6 nke gi akwara gi kariri nke mmiri, n’ezie, na inwe obere mmiri n’ahụ gị pụtara obere akwara, ị drinkingụ mmiri b tupu na mgbatị gị ga - eme ka ị nwee ume ma nwee ntụsara ahụ, ọ na - ewetakwa mmiri n’ebe kwesịrị ekwesị n'ime ahụ ọhụrụ ma belata ohere mbufụt na ihe mgbu metụtara mmega ahụ na ibuli ibu, ị nwedịrị ike na-arịa ọrịa na-asachapụ ụfọdụ ngwaahịa mkpofu dị ka igwe, mana ọ bụrụ na ị naghị agbanye mmanụ mmiri ọ gaghị arụ ọrụ ọfụma. Ahụ akpịrị ịkpọ nkụ na-amalite akụkụ ya iji sere mmiri site na ebe echekwara dị ka Iji see ọbara gị? Rịọ usoro nsogbu na ike ọgwụgwụ mgbe aru na-agbaziri mmiri site n'ọbara na enweghị ezigbo hydrated ọbara na-eduga na enweghị oxygen ofbụ raw n'ime ahụ dum N'ezie, enweghị oxygen na-eduga n'izu ike na enweghị oke ume Watch ga-enweta. Okuku n'oge gara aga ma n'oge gara aga Cheta na kọfị agaghị enyere aka ogologo oge9 - enwere ihe mgbu agụụ na-agụ, ị na-agbasi ike Mgbe ị na-eteta agụụ nri abalị, ahụ nwere ike ịmalite iche na ọ bụ ihe iri nri na-eme ihe niile ehihie na abali ka ị na-eteta agụụ agụụ nri abalị nke ahụ na-agafe10 You nwere nsogbu nri nri Anyị kwuru na mbụ banyere imi dị n'ọnụ anyị na akpịrị na otu esi echekwa mmiri maka diaphragm ka ọ rụọ ọrụ nke ọma nke a metụtakwara usoro ọgwụgwọ niile. Mmiri ahụ kwesịrị ekwesị na-ebelata ego na ike nke imi n'ime afọ iji mee nnukwu ihe n'ime ime gị Nke a na - eduga n'ihe anyị na - akpọkarị nrekasi obi, na mgbaze, ị na - enweta nká - oke mmiri nke ahụ gị na - ejide na - , mbelata na afọ, dịruo d ịka nká na-atụgharị uche na-apụ apụ n'oge na-adịghị anya12 ị hụrụ nke a ma ị bịarute ebe a ma ọ bụrụ na ị pịa ked na isiokwu a ohere ị chere hmm? echeghị m na m ga-a enoughụ mmiri ọ enoughụ enoughụ ma ọ bụrụ na i kwenyeghị na ị ga-eme ya, ka ọ bụ iko? Ọ bụrụ na ịnwetaghị ego a tụrụ aro, nke dị elu karịa ka ị chere na enweghị mmerụ dị na ị drinkingụ mmanya, ugbu a ịchọrọ ịlele enyo gị? Nke a bụ ule ọsọ ọsọ, ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ na-agbapụta ozugbo, dọta akpụkpọ ahụ na azụ aka gị ọnụ ma ị dị mma nke ọma, mana ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ nọrọ n'ọnọdụ ahụ ọbụlagodi oge ị gwụrụ ma nwee iko nke mmiri ugbu a Cheta na ogo mmiri dị iche iche nwere ike ịdị oke egwu Ka anyị meghachi ma gosipụta ihe ịrịba ama nke akpịrị ịkpọ nkụ, akpịrị ịkpọ nkụ, ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ọbụlagodi iwe na-acha odo odo n'oge mposi na-akwụsịtụ Cheta na onye ahụike dị afọ isii iji kpọ aha gị. akpịrị ịkpọ nkụ Oké akpịrị ịkpọ nkụ na oke otiti obi ngwa ngwa Amaghị ama Ọsọ ọsọ Na-eku ume Oghere Obere nrụgide Akpụkpọ anụ kpọrọ oke Oké dizziness Ọ dịghị ọsụsọ, ọbụnadị ihu igwe na mmamịrị gbara ọchịchịrị Ọ bụrụ na ị nwere obere mposi na-agbaji ma ọ bụrụ na ị mata otu n'ime ihe ịrịba ama ndị a, gaa ma nwee iko H2o ozigbo Kedụ ihe kacha masị gị? Ndi gị echiche na-aza ajụjụ n'okpuru? Echefula kụrụ bọtịnụ Dị ka ma soro ndị enyi gị lelee edemede a bara uru iji nyere ha aka mee ka ahụike ha dị mma
Kedu ihe dị iche na akpịrị ịkpọ nkụ na ike ọgwụgwụ?
Ike ọgwụgwụIhe kpatara nke 10:Akpịrị ịkpọ nkụ
Gịike ọgwụgwụnwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nkeakpịrị ịkpọ nkụ. Ma ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na tebụl, ahụ gị chọrọ mmiri iji rụọ ọrụ nke ọma ma dị jụụ. Y’oburu na akpiri kporo gi nkuakpịrị ịkpọ nkụ. Idozi: Na-a waterụ mmiri ogologo ụbọchị niile ka mamịrị gị na-acha odo odo.
Look na-adịkwu adọka mgbe akpịrị kpọrọ nkụ?
Dị kagịjupụta uru gị na glycogen,hasere mmiri n’ime akwara. Ezigbo mmiri nke mmiri ahụ ga-esi n'okpuru akpụkpọ ahụ pụta.Ya meresite na carb na-abanye na ụbọchị ole na ole gara aga,gị're bụghị naanị na-enyere ahụ gị akalee anyaburu ibu ma zuru ezu kamakwa na-enyere ahụ gị aka inweta ihe ahụshredded anya.23 jul. Dec 2019
Mmiri ọ na-eme ka mgbake dị ngwa?
Akpịrị ịkpọ nkụ pụrụ ime kamgbakeoge na-adịwanye njọ. Na-arinụmmiribara uru nana-agba osonamgbakeoge na iwepu mmetụta nke ọnya - iwepu nsị na ahụ gị, na ịdebe gịmọzụlụna-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.June 15. 2017 Nọvemba
Ego ole ka ị kwesịrị ị drinkụ kwa ụbọchị iji nweta ahụ ike?
Ezigbo ụkpụrụ nduzi bụụọ ihe ọ .ụ .ụihe dịka 50 ml (1.7 oz. oz.)makakilogram ahu ibu ofụriụbọchị.12 nke 2014
Kedu ihe ike ọgwụgwụ na-akụda na-adị?
Yanammetụtamiri emi erikpuoike ọgwụgwụ, hana-akụda ike ọgwụgwụnwere ike ibia n'ụdị nke mgbaàmà ya gụnyere mgbakasị, belata ịnụ ọkụ n'obi banyere ndụ, enweghị mkpali, nsogbu itinye uche, agụụ na-agakarị, enweghị ike ihi ụra nke ọma, na-agba ọsọ n'ehihie n'abalị, na-eteta ike gwụrụ, naJune 1. 2016 Nọvemba
Kedu ka ike ọgwụgwụ na-adị?
Ike ọgwụgwụna-akpata gị-enwe mmetụtana-ehi ụra ma ọ bụ na-agwụ ike ma dị umengwụ. Sldị umengwụ a nwere ike ịbụ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke uche. A kọwara ndị nwere mgbaàmà ndị adikana-egbu mmụọ.
bmc slr01 nyocha
Enwere njikọ dị n'etiti akpịrị ịkpọ nkụ na ike ọgwụgwụ?
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nwute ndị nwute, akpịrị ịkpọ nkụ na mmiri pụrụ ịgwụ gị ike. Ọ bụ ezie na ihe gbasara ahụike na ike ọgwụgwụ na-egosi obere ọmụmụ, sayensị bụ isi doro anya: ahụ gị chọrọ mmiri ka ọ rụọ ọrụ.
Gịnị bụ mmetụta akpịrị ịkpọ nkụ na-agwụ n'ahụ?
Ọfọn, na-atụle na ahụ gị bụ 75% mmiri, mmetụta ọ nwere ike ibu. Mkpụrụ bụ 75% mmiri, ọbara bụ 82% mmiri, ngụgụ bụ 90% mmiri, ụbụrụ gị bụ 85% mmiri na ọbụlagodi ọkpọ gị bụ 25% mmiri.
Kedu ka akpịrị ịkpọ nkụ si emetụta ọrụ gị na ọnọdụ gị?
Na mgbakwunye, akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike imetụta arụmọrụ na ọnọdụ, na-eduga na ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ. Ka ahụ gị na-alụ ọgụ iji wepụta mkpụrụ nri na mmiri kwesịrị ekwesị na sel, ị nwere ike ịmalite adịghị ike akwara na mgbochi - ihe mgbaàmà ọzọ nke akpịrị ịkpọ nkụ.